Waa Maxay Faa'iidada Caafimaad ee Laga Helo Koostada? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Waa Maxay Faa’iidada Caafimaad ee Laga Helo Koostada?
Koostadu waa caleen cagaaran oo aad looga isticmaalo meelo badan oo dunida ka mid ah, waxaa afka english-ka lagu yiraahdaa Spinach siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa sida in cunto ahaan loo karsado ama cabbitaan ahaan loo shiito.
1:Koostada waxaa aad ugu badan maadada jirka sunta ka saarto ee loo yaqaan Antioxidants, waxaa kaloo ku jiro maadada Folate taasoo la rumaysan yahay in ay faa’iido caafimaad u leedahay wadnaha iyo xididada.
2:Maadada magnesium ee laga helo koostada waxay ka qeyb qaadataa kantaroolidda cadaadiska dhigga.
3:Koostada waxaa kaloo ku badan maadooyin la dhaho beta-carotene, lutein iyo xanthen oo indhaha faaido ugu jirto kuwaas oo siyaadiyo awoodda aragga.
4:Cilmbi baaris dhowaan la sameeyay ayaa lagu sheegay in koostadu in koostada ay kobciso xasuusta, shaqada maskaxda iyo foojignaanta.
5:Nafaqada muhiimka ah ee koostada ku jirta sida Vitamin B, C, E, potassium, magnesium, iron, calcium iyo omega3 waxay u fiican yihiin caafimaadka timaha.
Tusaale ahaan birta (iron) waxa ay caawisaa in ogsajiinta dhiiggu ay gaarto timaha, isku darna waxa ay maaddooyinkani timaha u soo celiyaan quruxda, iyo bixitaanka dabiiciga ah.
6:Ugu Dambeyntii koostadu waxay u wanaagsan tahay dheefshiidka, waxay ka hortagtaa calool fadhiga, waxay kaloo u roontahay dadka qaba gaaska.
Akhriste hadaad akhrisatay qormadan caafimaad fadlan #LIKE saar si ay walaalaha kale ee boggan ku xiran usii gaarto, haddi aad sii #SHARE garaysid-na kaba sii fiican oo walaalaha iyo saaxiibadaada ayaa waxaad faa’iiday lasii wadaagtay, anigana dhiirigelin bay ii tahay mahadsanidiin.
Hadaad tahay walaal ku cusub boggan, nagula soo biir si aad ula socoto qormooyin iyo muuqaalo xiiso badan.
Previous articleMadaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Qaabilay Diblomaasiyiin Ka Socday Dalalka Midowga Yurub Iyo UK Oo Dalka U Yimi Indho Indhaynta Doorashooyinka.
Next articleWasaarada waxbarashada Somaliland ayaa go’aanadan soo saartay:-